မျှော့ပါတာ မွေးရာပါစွမ်းရည် တစ်ခုလား? | သိလိုရာမေး
ထွေလာဆန်းပြား လိင်ဆောင်းပါး, ဒေါက်တာဒိအားမေးရန် မျှော့ပါတာ မွေးရာပါစွမ်းရည် တစ်ခုလား?
ကျွန်တော်တို့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ကာလသားကြီးတွေကပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ယောကျာ်းလေးတွေ အချင်းချင်း စနောက်ပြီးပဲ ဖြစ်ဖြစ် လိင်မှုကိစ္စနဲ့ ပက်သက်လာရင် ပေါက်ပန်းလေးဆယ်တွေ ပြောကြတဲ့အထဲမှာ မိန်းမတွေမှာ မျှော့ပါတယ် ဆိုတာလဲ ကြားဖူးကြမယ်ထင်ပါတယ်။
သာမန် မိန်းမထက် မျှော့ပါတဲ့ မိန်းမနဲ့ အတူနေရင် ပိုဖီးလ်လို့ ကောင်းတယ်… မျှော့ပါတဲ့ မိန်းမကိုမှ ယောကျာ်းတွေက တမ်းတမ်းစွဲတာ… အစရှိသဖြင့် ပြောကြတာတွေလဲ စုံလို့ပေါ့။ ဒီလိုပြောကြတဲ့ တချို့ကာလသားတွေကို “ဒါဖြင့် မိန်းမတွေမှာ ရှိတဲ့ မျှော့ဆိုတာ ဘာလဲ” ဆိုပြီး တိတိကျကျ သွားမေးမယ်ဆိုရင်တော့ အသေးစိတ် ဖြေပေးနိုင်မယ့်သူ ရှားမယ်ထင်ပါတယ်။
သေချာတာကတော့ မျှော့ဆိုတာ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာ အောင်းနေတဲ့ သွေးစုပ်တတ်တဲ့ မျှော့မဟုတ်တာတော့ အသေအချာပါပဲ။ မိန်းမတွေမှာ မျှော့ပါတယ်ဆိုတာ မိန်းမကိုယ်နဲ့ ဆက်စပ်နေတဲ့ တင်ပါးဆုံ ကြွက်သားညှစ်အားကောင်းတာကို ဆိုလိုချင်တာလို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ ဒီထက်ပိုပြီး ကွင်းကွင်းကွက်ကွက် ရှင်းခနဲနေအောင် ထပ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ တင်ပါးဆုံကြွက်သားသန်မာပြီး ညှစ်အားကောင်းတဲ့ အမျိုးသမီးနဲ့ အတူနေတာက ယောကျာ်းရဲ့ လိင်တံကို ညှစ်ထားသလိုဖြစ်ပြီး ဆက်ဆံဖော်ကို သာမန်ထက်ပိုပြီး စိတ်ခံစားမှုကောင်းစေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကို အစွဲပြုပြီး မျှော့ပါရင် ပိုဖီးလ်လို့ ကောင်းတယ်ဆိုတာ ဖြစ်လာတာပါပဲ။
ဒါဖြင့်ရင် ယောကျာ်းတွေ တမ်းတမ်းစွဲလှပါတယ်ဆိုတဲ့ မျှော့ပါတဲ့ မိန်းမဆိုတာ မွေးကတည်းက ကံကောင်းပြီး မွေးဖွားလာသူလား? ဒါမှမဟုတ်ရင် မိန်းမအယောက်တစ်ရာမှာမှ တစ်ယောက်လောက်ပဲ ရှိနိုင်တဲ့ စွမ်းရည်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားသူလား? အဖြေကတော့ နိုးပါ… ဘယ်မိန်းမကမှ ကံထူးပြီး မွေးကတည်းက ယောကျာ်း တမ်းတမ်းစွဲနိုင်တဲ့ စွမ်းရည်ကို ရထားတဲ့ မိန်းမ မရှိသလို ကံကောင်းတဲ့ မိန်းမမှ မျှော့ရှိတယ် ဆိုတာကြီးက လုံးဝမမှန်ပါဘူး။ ဒီတော့ အမျိုးသမီးထုကြီးအနေနဲ့ ကိုယ့်အိမ်ထောင်ဖက်က ကိုယ့်ကို အချစ်ကြီး ချစ်နိုင်စေဖို့ အထောက်အကူပြုမယ့် မျှော့ရှိဖို့ ဆိုတာကို ကြိုးစားပြီး လုပ်ယူလို့ရပါတယ်။
ကဲ ဒီတော့ ချစ်မောင်တော်တွေ တမ်းတမ်းစွဲစေဖို့ မျှော့ပါတဲ့ မဟေသီဖြစ်အောင် ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ? ဒါကတော့ လွယ်ပါတယ်။ မျှော့ဆိုတဲ့ မိန်းမကိုယ် တင်ပါးဆုံကြွက်သားတွေ အားကောင်းစေဖို့ လေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေ လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလေ့ကျင့်ခန်းကို ကီဂယ်လေ့ကျင့်ခန်းလို့ ခေါ်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ တင်ပါးဆုံကြွက်သားဆိုတာက ယောကျာ်းရော မိန်းမမှာပါ ရှိတဲ့အတွက် ခုပြောပြမယ့် လေ့ကျင့်ခန်းတွေကို အမျိုးသားရော အမျိုးသမီးပါ လုပ်လို့ရပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ ကီဂယ်လေ့ကျင့်ခန်းတွေ အများကြီး ရှိတဲ့အထဲက လုပ်ရအလွယ်ဆုံးလေ့ကျင့်ခန်း နှစ်မျိုးကို သိလိုရာမေးက ပြောပြပေးသွားပါ့မယ်။
ပထမတစ်ခုကတော့ တင်ပါးဆုံကြွက်သားတွေချည်းပဲ သက်သက်ကျုံ့ထားရတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းပါ။ ဒီလေ့ကျင့်ခန်းက ဉပမာအနေနဲ့ ပြောရရင် ဆီးသွားရင်းနဲ့ ခဏ ၃စက္ကန့်ကနေ ၅စက္ကန့်လောက်ထိ ဆီးအောင့်ထားပြီး ဆီးပြန်သွားရတာနဲ့ ဆင်တူပါတယ်။ အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ တင်ပါးဆုံကြွက်သားတွေကို စက္ကန့်အနည်းငယ်လောက် ကျုံ့လိုက် ပြန်ဖြေလျော့လိုက် လုပ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သတိပြုရမှာက တင်ပါးဆုံကြွက်သားကို ညှစ်ပြီး ကျုံ့ထားတဲ့အချိန်မှာ အသက်မအောင့်ထားဘဲ ဖြည်းဖြည်းမှန်မှန်နဲ့ အသက်ရှူသွင်း ရှူထုတ်လုပ်ဖို့ လိုပါတယ်။ ဒီလေ့ကျင့်ခန်းကို အိပ်နေရင်းပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ထိုင်နေရင်းမှာပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ အလုပ်လုပ်နေရင်းမှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် လွယ်လွယ်ကူကူ လုပ်လို့ရပါတယ်။
ဒုတိယတစ်ခုက တင်ပါးဆုံကြွက်သား မြှင့်တင်တဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းပါ။ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ ပထမဦးဆုံး သက်သောင့်သက်သာရှိတဲ့ နေရာမှာ ပက်လက်အနေအထားနဲ့ ဒူးနှစ်ဖက်ကို ၉၀ ဒီဂရီ ထောင်ထားပါ။ ပြီးရင် နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ အသက်ကို ဖြည်းဖြည်းမှန်မှန် ရှူသွင်းပြီး ခါး၊ ပေါင် နဲ့ တင်ပါးကို ဒူးနဲ့ တပြေးညီ မြှင့်တင်ရပါမယ်။ မြှင့်တင်ထားတဲ့အချိန် ၃စက္ကန့်ကနေ ၅စက္ကန့်အတွင်းမှာ တင်ပါးဆုံကြွက်သားကို ကျုံ့ထားရပါမယ်။ ပြီးရင်တော့ နဂိုမူလအစပထမ ပုံစံကို ပြန်သွားပြီး ဖြေလျှော့ပြီးရင်တော့ ဒါကို တစ်ကြိမ်လို့ သတ်မှတ်ရပါမယ်။ ဒီလေ့ကျင့်ခန်းကို စစချင်းမှာ အနည်းဆုံး ၃ ကြိမ်က စပြီး နောက်ပိုင်းတွေမှာ တဖြည်းဖြည်းတိုးပြီး လုပ်သွားလို့ရပါတယ်။
ဒီလေ့ကျင့်ခန်း နှစ်ခုကတော့ အလွယ်ကူဆုံးနဲ့ ထိရောက်စေမယ့် အမျိုးသားရော အမျိုးသမီးရော လုပ်လို့ရမယ့် ကီဂယ်လေ့ကျင့်ခန်းတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ကလေးမွေးလိုက်လို့ မွေးလမ်းကြောင်းကျယ်နေတဲ့ အမျိုးသမီးတွေ၊ လိင်မှုဘဝမှာ ဆန္ဒပြည့်ဝစေချင်တဲ့အမျိုးသမီးတွေ၊ သားအိမ်ကျဖူးတဲ့ အမျိုးသမီးတွေက ဒီကီဂယ်လေ့ကျင့်ခန်းကို လုပ်မယ်ဆိုရင် တင်ပါးဆုံကြွက်သားအားကောင်းမယ့် အပြင် တခြားအကျိုးကျေးဇူးတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ အမျိုးသားတွေလဲ ဒီလေ့ကျင့်ခန်းကို လုပ်မယ်ဆိုရင် သုက်ကို ကြာကြာထိန်းထားနိုင်တာ၊ အတူနေချိန်မှာ ဆန္ဒအထိတ်အထိပ်ရောက်စေဖို့ အထောက်အကူပြုတဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေရှိပါတယ်။
အခုဆိုရင်တော့ ယောကျာ်းလေးတွေအနေနဲ့လဲ အမျိုးသမီးတွေမှာ ရှိတဲ့ မျှော့ဆိုတာကို ဘာလဲ ဆိုတာ ကောင်းကောင်းနားလည်မယ်ထင်သလို အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ ကီဂယ်လေ့ကျင့်ခန်းတွေကို လုပ်ပေးမယ်ဆိုရင် မျှော့ဆိုတဲ့ မိန်းမကိုယ်ကြွက်သားတွေ အားကောင်းစေဖို့အပြင် တခြား ကျန်းမာရေး အကျိုးကျေးဇူးတွေရရှိနိုင်မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။